आफ्नै कलाकारले साथ नदिएपछि... - मनोरञ्जन - साप्ताहिक
चलचित्र ‘मिस्टर नेपाली’मा अभिनेता भुवन केसीको मुख्य भुमिका छ । उनलाई अभिनेत्री रिमा विश्वकर्माले साथ दिएकी छिन् । यो चलचित्र आगामी कात्तिक २९ मा प्रदर्शन हुँदैछ ।
चलचित्र प्रदर्शन त हुँदैछ, तर कलाकारहरुले प्रचार–प्रसारमा साथ नदिएपछि यसको व्यापार कस्तो होला ? प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
प्रदर्शन हुने बेला आउँदा समेत चलचित्रका कलाकारहरु बेखबर छन् । न प्रचार–प्रसारमा हिडेको देखिन्छ, न सामाजिक सन्जालहरुमा सक्रिय छन् । कतिसम्म भने उनीहरु पटक–पटक मिडियाकर्मीसँग भेटघाट हुँदा आफ्नै चलचित्रका बारेमा मुख खोलेका छैनन् ।
आफ्नै कलाकारहरुले साथ नदिएपछि चलचित्र निर्माण टिम अहिले तनाबमा छ । सामान्य भुमिकामा काम गरेका कलाकारहरुले त ठिकै छ, चलचित्रका मुख्य कलाकार समेत आफ्नै काममा व्यस्त भएपछि चलचित्रका निर्देशक देव भुषाल रनभुल्लमा परेका छन् ।
चलचित्रका मुख्य कलाकार भुवन केसी र रिमा विश्वकर्माले समेत अहिलेसम्म न मिडिया घुमेका छन् । तर प्रचारका लागी कुनै कदम चालेका छन् । आफ्नो समाजिक सन्जालमा समेत उनीहरुले चलचित्रका बारेमा कुनै स्ट्याटस र तस्विरहरु पोस्ट गरेका छैनन् । सोहि कारण चलचित्र बजारमा मिस्टर नेपालीका बारेमा हो–हल्ला निकै कम छ ।
संसारभरका जतिसुकै ठुला सेलिब्रेटी हुन्, उनीहरु आफ्नो चलचित्रको प्रचारका लागी सबै काम थाती राखेर हिड्ने गर्छन् । यदि कलाकार नहिड्नेहो भने उक्त चलचित्र धरापमा पर्न सक्ने सम्भावना बढि हुन्छ ।
यो चलचित्रका कलाकारहरुले यति कुरा बुझिदिए कम्तीमा लगानी त डुब्दैन्थ्यो कि ? बाँकी त देखाजायगा !